‘अर्थमन्त्री हुँदा पनि महरा लाज पचेका हर्कत देखाउँथे’
काठमाडौं । अहिले समाचारीया बजार प्रतिनिधि सभा माथ्लो सदनका सभामुख कृष्णबहादुर महराका पक्ष विपक्षमा उत्रिएको छ । संसद सचिवालयमा काम गर्ने महिलाको डेरामै गएर महराले मदिराको मातमा अनैतिक क्रियाकलाप गरेको आरोप लागेको छ । महिलाको भिडियो कुराकानी पनि छ्यापछ्याप्ती छ, समाजिक सञ्जालमा । महराकाको सचिवालयले होइन, प्रेस संयोजकले विज्ञप्ति निकालेर सुनियोजित आरोप भनेका छन् । तर, डढेलो सत्ताधारी पार्टीभित्रसम्म फैलिएपछि महराले पदबाट राजीनामा दिए । कुरा त्यति मात्रै होइन, महरामाथि आरोप लगाउने महिला मानसिक असन्तुलनको सिकार भएको र उनले यसअघि आत्महत्याका प्रयास गरेको भनी खबर आएका छन् ।
समाचार कहाँ के आए ? कसले के भने ? भन्नेतिर धेरै जानु उपयुक्त हुँदैन । घटनाको वास्तविकता थाहा नभई वक्नु राम्रो हुँदै होइन । अध्ययन अनुसन्धानको बाँकी काम गर्न राज्यका विभिन्न संयन्त्र छन् । समाचारले मूल भूमिका अर्थात् ‘लिड रोल’ खेल्ने होइन । सत्यताका नजिक भए, केही हदसम्म सहयोगि मात्रै हुन सक्लान्, समाचारमा आएका कुरा । विभिन्न कित्तामा विभक्त समाजमा त्यो पनि नहुन सक्छ ।
हामीले यहाँ कुरा गर्न खोजेको हो, महराको आनीबानीको । महरा शालीन र शील स्वभावका भरेर उनको पार्टी निकटका पत्रकारले भनिरहेका छन् । ठीकै हो, हेर्दा सोझो लाग्छन्, महरा । बोली पनि प्रष्ट छैन । कुनै कुनै शब्द उच्चारण ठीक ढंगले हुँदैन । त्यो सदन चलाउँदा सबैले देखे सुनेकै कुरा हो । व्यवहारतः उनी शालीन रहेको कुरामा केही सत्यता होला । तर, लाज भने उहिल्यै पचाईसकेका । अब यहाँनेर एक जना पूर्व माओवादी छापामारको कुरा जोडौं । उनी पनि रोल्पाकै, महरा पनि रोल्पाकै । शान्ति सम्झौतापछि महरा मन्त्री भए । प्रचण्डको पछिल्लो कार्यकालमा त झन्, अर्थमन्त्री नै भए । महरा अर्थमन्त्री भएको बेला पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास भेंट्न गएँ, ति पूर्वछापामारले भने, ‘जागिर लगाईदिने कुरा थियो । आश्वासन पहिलेदेखि नै थियो । यो पल्ट कँही न कहीँ मिलाउँछु भनेकाले भेट्न थएको हुँ । निवासमै छिरिसकेपछि उहाँले हामीलाई भाउ दिनु भएन । बरु अस्वभाविक हर्कतहरु देखाउनु भयो । माथिल्लो पदमा पुगेपछि लाज, घिन भन्ने कुरा पच्दै जाँदो रहेछ ।’
महरा अर्थमन्त्री हुँदा मन्त्री निवासमा भेटघाट गर्ने मान्छेहरुको विहानैदेखि लर्को हुन्थ्यो । उनले अगाडि थपे, ‘लर्को कै बीच हामीपनि थियौँ । हामीसँग केही महिला साथीहरु पनि थिए । तर, मराको बसाई, महराको वात मार्ने शैली देखेर मलाई उदेक लाग्यो । अर्थमन्त्री जस्तो मान्छे–बस्दा उठ्दा पनि सामान्य सावधानी त अपनाउनु पर्ने । अनि जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि नम्रताका साथ कुरा सुन्नु पर्ने । हामीले त्यस्तो देखेनौँ ।’
त्यति मात्रै होइन, महराको आनीबानीबारे उनले अर्को कुरा पनि गरे । घृणा गर्दै उनले भने, ‘उहाँले बस्दा उठ्दा पनि सावधानी अपनाउनु भएन । महिला दिदीबहिनी बसिरहेकैबीच उहाँ, आफ्नो गोप्य अंगतिर हात लिएर कन्याउने । र, हरेक पल्ट हाल लिइरहने गरिरहनु भयो । पहिलो भेटमा हामीले त्यसको वस्ता गरेनौँ । पछि–पछि पनि भेटमा त्यस्तै गतिविधि दोहोरिरहे । महिला दिदीबहिनीले अफ्ठेरो मान्न थाले । हामी पनि छेक्किएर बस्न थाल्यौँ । मलाई त फोटो खिचम् कि भन्ने सुरु चलेको थियो । तर, भित्र मोबाइल लिन नपाईने । फोटो खिच्ने साधन थिएन । के गरौँ आज भन्दा कथा बुनेको भन्लान् । हामीले भोगेको कुरा हो ।’ लाज पचेका हर्कत देखाउनु भयो, पछि हामी जानै छोड्यौँ ।
अनि जागिरको कुरा के भो ? जवाफमा उनले भने, ‘जागिर भएन । हामी केटालाई के जागिर मिल्थ्यो ? केटी वा महिला साथीहरुले पाए क्यारे । हामी अहिले पनि म्यानपावरलाई पासपोर्ट बुझाएर, डुलेर बसेका छौँ ।’ अहिलेको घटनासँग पनि जागिरकै विषय जोडिएको छ । महराले आफुमाथि आरोप लगाउने महिला कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । जागिरका विषयले महरालाई अफ्ठेरो पार्ने देखिएको छ ।
विपक्षी दलका केही नेताले सभामुख कृष्णबहादुर महराको चिनियाँ व्यापारीसँग कुराकानी भएको ५० करोडको अडियो टेपको कुनै छानविन नभएको तर, यो घटनाको छानविन हुनुपर्ने औंल्याएका छन् ।
<<< : आज चन्द्रघण्टाको पूजा
सभामुख महराले लेखे घुमाउरो भाषाको राजीनामा : >>>
कोरोनाले बढायो सुनको भाउ, नेपाली बजारमा तोलाको ८० हजार